Antso Misokatra Ho An’ny Fandraisana Anjara Anatin’Ireo Atrikasa Mikasika Ny Fitaovana Dizitaly Ho Amin’ny Fiovàna Ara-tsosialy Any Goatemalà Sy Nikaragoà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Aogositra 2012 16:06 GMT
Natao avy tamin'ny antso tena izy tao amin'ny tranonkalan'ny Activismo [es]
Fara-Firotsahana: 31 Aogositra, 23:59 GMT-6
Ny Rising Voices dia faly miara-miasa amin'ireo atrikasa roa ho tanterahana any Nikaragoà sy Goatemalà ho an'ireo tanora mampiasa ny media dizitaly ho amin'ny fiovàna ara-tsosialy. Miaraka amin'ny mpiara-miasa aminay, Hivos sy ny mpikarakara ny atrikasa, Dialogía, hampivondrona ny tanora manodidina ny 18-25 taona eo ho eo ireo “toby” ireo izay antsoina amin'ny anarana hoe “Activistmo“, izay hisintona ny tombontsoa azo amin'ny Aterineto sy ireo fitaovana dizitaly mba hanandratana ny fiovàna ara-tsosialy, hiraketana ireo fitarainana, hikarakarana hetsik'ireo mafàna fo, na hananganana foibe fandraisana anjara anatin'ny iray amin'ireto fotokevitra maro manaraka ireto:
Ireo Olana mahakasika ny tontolo iainana (anatin'izany ny fivoarana maharitra, “agro-ecologie”, ny rano sy ireo harena an-kibon'ny tany, sns.)
Ireo zo sivily ay ara- politika (isan'izany ny fangaraharan'ny sehatra ara-panjakana, fahalalahana amin'ny finoana, sy ny fahalalahana miteny, sns.)
Fiaraha-mientana ara-tsosialy (anatin'izany ny fahazoana fahalalana amin'ny kolontsaina, ireo hetsika ara-panabeazana, fahasamihafan'ny fananahana, ny zon'ny vehivavy, sns.)
Fiaraha-mientana ara-dizitaly (isan'izany ny rindrambaiko maimaim-poana, ireo zo ara-dizitaly, fanentsenana ny fisamantsamahana ara-dizitaly, ny fangaraharan'ny aterineto, sns.)
Ampahany amin'ireo hetsika maro tohanan'ny Hivos ireo atrikasa ireo, izay naha-mpiara-miasa goavana ny Rising Voices. Mifantoka amin'ny vahoaka tanora sy ny fampiasàna ny mediam-bahoaka sy dizitaly ho amin'ny fiovàna ara-tsosialy ireo hetsika ireo, ary ahitàna ny atrikasa “Digital Natives With a Cause?” natao tany Santiago, Shily tamin'ny 2010 sy ireo fampivondronana “Conectándonos” natao tany Cochabamba, Bolivia tamin'ny 2011 sy Loja, Ekoatora tamin'ny 2012. Nikarakara hetsika antsoina hoe “Conectémonos” izay natao tany Costa Rica tamin'ny 2011 tao Amerika Afovoany ihany koa ny Dialogía.
Alohan'ny handraisanao anjara, miangavy anao handinika ireto antsipiriany manaraka ireto:
Ny atrikasa ho an'ny Vondrona 1 dia hotanterahina any Managoà, Nikaragoà ny 28-30 Septambra 2012. Ny atrikasa ho an'ny Vondrona 2 dia hotanterahina any Goatemalà ny 19-21 Oktobra 2012.
Ny avy amin'ireo olon-tsotra avy any Costa Rica sy Nikaragoà (Vondrona 1) sy ireo avy any El Salvador sy Goatemala (Vondrona 2) ihany no fandraisana anjara horaisina. Indrisy tsy afaka mampiditra ny avy any Panamà na Hongroa isika mandritra ireo atrikasa ireo.Na izany aza anefa, hisy atrikasa mifantoka manokana amin'i Hongroa amin'ny 2014.
Hivos no handrakotra ny fandaniana amin'ny fifamoivoizana, ireo vola lany amin'ny fivoahana, sakafo, fiantranoana, sy ireo fitaovana amin'ny atrikasa.
Inona no horesahina mandritra ireo atrikasa rehetra ireo?
Miaraka amin'ireo atrikasa ireo, te-hanampy ireo tambajotranà tanora hàka ny tombontoa rehetra avy amin'ireo teknolojiam-pahalalàna sy fifandraisana izahay mba hampiroboroboana ny fiovàna ara-tsosialy. Ireto avy ireo tanjona manokana amin'izany:
Fampiroboroboana ireo fahafahana manofana sy mandalina ny zon'olombelona.
Fizaràna ny fahalalana fototra amin'ny fampiasàna ireo fitaovana teknika ho amin'ny hafanam-po ao anaty aterineto.
Fianarana ireo singa manan-danja hananganana fanentanana na tetikasa.
Hanana atrikasa fanofanana izahay momba ny zo ara-dizitaly, ireo fitaovana fitànana ny tsiambaratelo ao anaty aterineto, ary ny fampiasàna fototra ireo rindrambaiko mba hanana fiantraikany tsara kokoa , ankoatr”ireo hafa.
Ho fanampin'izay, handinika ireo fandalinana tranga mitombina mikasika ny hafanam-po aty anaty aterineto isika.
Raha te-handray anjara ianao, miangavy anao hameno ity taratasy fandraisana anjara ity:
Raha misy fanontaniana, ampiasao ity rohy eto ity.
12 ora izayAngola